Shiinaha-engeeg mashiinka dayactir warshad iyo saarayaasha | TAA
Qalabka dayactirka la heli karo
Mawduuca Cr-12%, 20%, 25% ama codsi ahaan.
Habka iyo tiknoolajiyada saxda ah ee casriga ah iyo farsamada.
Oolnimada sare iyo si toos ah line-soo-saarka qalajinta saldhig kaliya.
Qalabaynta chromium-ka ee khaaska ah ee birta ah, oo ka dhigaysa farqiga u dhexeeya warshadaha gudaha.
Qeybaha Asalka ah ee Soosaaray (OEM) waa la heli karaa.
Waxaan sidoo kale bixinnaa qaybo ka dambeeya suuq tayo sare leh oo loogu talagalay mashiinnada kale ee sumadda leh.
Hore: Giraangiraha qaraxa
Xiga: Goynta taxane FS-01 taxane ah
Qafiska Xakamaynta Gawaarida
Qaybo ka mid ah Qalabka Mashiinka engeeg
Daboolka Ilaalinta Safka
Nidaamyada Khadka Tooska ah
Safka Safka Difaaca
Taarikada Ilaalada Side
Calan Side Side
Qaybo ka mid ah dayactir ee Machine-engeeg
Suxuunta Side Square
Saxanka Sare ee Sare
Gantaal toogasho engeeg
Faa'iidooyinka mashiinka qaraxa durbaan durugsan Technology engeeg lagu kalsoonaan karo: Drum mashiinada qaraxa shot waxaa soo saaray dhowr kala duwan oo kala duwan, noocyada iyo qiyaaso. Iyagu waa is haysta oo kaliya waxay leeyihiin raad aad u yar. Si joogto ah ayaa loo ogaan karaa iyadoo la isku xiro dhowr mashiin. Layout-friendly Layout: Dayactirka joogtada ahi wuxuu muhiim u yahay ilaalinta qiimaha muddada fog ee qalabka. Adeegyada waaweyn iyo albaabbada kormeerka waxay bixiyaan ac fudud ...